ငါ့ချစ်မြင်းလိင်ဂိမ်း–အခမဲ့ Mlp ညမ်း
အလှအပအတွက်အင်တာနက်အပြာကားသည်လွတ်လပ်မှုရှိသည်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အားလုံးထောင့်များ၏လိင်နှင့်အတူအမျိုးမျိုးဖြစ်သေား။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေအမျိုးအစားကဘာလဲ fetish ပြီ၊အင်တာနက်ထောက်ပံ့ပေး။ နှင့်မျှမကောင်းအလတ်အဘို့ပူဇော်သက္ကာစုစုပေါင်းလိန်ရှာဖွေရေးထက်လိင်ဂိမ်းများ။ သာညမ်းလိင်ဂိမ်းများသင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူစမ်းသပ်သောအမှုအရာခဲလှ၏အောင်မြင်စစ်မှန်သောအသက်ကိုအတွက်သို့မဟုတ်ဖြောင့်တက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အဲ fetishes အရေငတ်သင်၏အချို့အများအတွက်ချစ်စရာနှင့်ၡမ်ားဇာတ်ကောင်၌အကြှနျုပျအနည်းငယ်မြင်း။။။။။ သင်ပြီးသားသိသည်အဘယ်မှာရှိဤသည်အသွား! လျှင်သင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အကြော brony ကလပ်နှင့်သင်ခံစားချင်တယ်သင့်ရဲ့ fetish အတွက်ပိုပြီးအလှန်အလမ်းရှိသည်၊ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်စုဆောင်းငါ့ချစ်မြင်းလိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အအေးဆုံးအရာကယင်းအကြောင်းအဆိုပါဂိမ်းအုပ္ဆုိင္၏အစိတ်အပိုင်းအ brony။ သူတို့ဤမျှဝေ fetish နှင့်သူတို့အတိအကျသိဖို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်အလိုအထိအားလုံးသူတို့အားအမှုအရာအနည်းငယ်သာကြောင်းသင်ဖွင့်ပေါ်နှင့်ဖြစ်စေဝိဘတ်။, ရှိပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဒီစုဆောင်းမှု၊နှင့်ခြုံငုံအစာတော်တော်စေ့စပ်။ ပင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကန့်သတ် ourself ဖို့သာအသစ် HTML၅ ဂိမ်းများဒီဆိုက်တွင်၊ကျနော်တို့နေဆဲနက်ဖြန်ရှာဖွေရန်စီမံခန့်ခွဲဤမျှလောက်များစွာသောသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်အမဲလိုက်ခြင်းများအတွက်ပို။ ကျော်နှင့်အတူ ၁၀၀ နာရီ၏ဂိမ်းအများအပြားဂိမ်းများနှင့်အတူမြင့်မားအပြန်ကန်တန်ဖိုး၊ဒီအဖြစ်အသစ်ရဲ့အရင်းအမြစ် MLP။ လေ့လာသင်ယူရန်တာပေါ်မှာဖတ်အရာအားလုံးအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်!
အ MLP ဠာခဲ့အစုအဝေးအမျိုးမျိုးကြောအမ်ိဳးပတ်ပတ်လည်သူတို့ရဲ့ချစ်စရာၡမ်ားအနည်းငယ်။ ပေမယ့်တစ်ခုလုံးကို brony အသိုင်းအချစ်မယ်လို့စုတ်အနည်းငယ် ponies၊သူတို့အားလုံးဆီမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များအတွက်သူတို့ကိုအပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးများအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးယဉ်။ ကျနော်တို့ကဖန်တီးရန်စီမံခန့်ခွဲ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုညမ်းသောစိတ်ရောင်ပြန်ဟပ်လူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအလိန်အ MLP အရွယ်ရောက်ပြီး။
အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ငါတို့သည်လိင် simulators အရာ၌သင်ရနိုင်ရန်ကျေးဇူးပြုပြီးဤမျှလောက်များစွာသောမတူညီတဲ့ဇာတ်ကောင်အတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။ အားလုံးသူတို့ရဲ့အတွင်းဖွင့်ဘို့အစုတ်၊နှင့်သင်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူအမျိုး၏ရာထူးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြုမူ။ သူများဖြစ်ကြနည်းနည်းပိုပြီးအစွန်းရောက်ခံစားနိုင်စာမျက်နှာများမြင်းလိင်ဂိမ်းများ၊အရာအတွက်အ MLP ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သို့လှည့်ကြသည်ကျေးကျွန်နေသောဟစ်နေစဉ်သင်သည်ရန်သူတို့ကိုအတင်းဘယ်လိုလဲ။ နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့အမျိုးအစားအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အ futanari၊အရာ၌သင်တွေ့လိမ့်မည်၊လိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူအားလုံးအမှောင် reimagined သကဲ့သို့ယင်းနှင့်အတူဗဟို။
ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းဂိမ်းအတူပါလာသောပုံပြင်များနှင့်အ roleplay။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိကြငါ့ချစ်မြင်းရုပ်ပြောင်ဟာသဂိမ်းအပေါင်းတို့ကြွလာနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များနှင့်အငြိဇာတ်ကောင်အလှန်စေတော်မူမည်ဟူသောသင်အတွက်အမှန်တကယ်မှော်၏ဘုံ Equestria၊ဘယ်မှာမသာကြောင်းသင်မင်းကိုပြော ponies၊သင်မူကားလည်းအများလိင်နှင့်အတူအခြား anthro ဇာတ်ကောင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Griffons။
ဒါပေမဲ့အကြီးမားဆုံးတာမျိုးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သည်ငါ့ချစ်မြင်းနောက်ဆက်တွဲလိင်ဂိမ်းများ။ ဒီဂိမ်းကပိုပြီးတစ်ခုပွင့်လင်းကမ္ဘာနားနိုင်သည့်နေရာတက်လာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြင်းစက်ဝိုင်း။ စိတ်ကြိုက်သင့်အိပ်မက်မြင်း fursona ပြီးတော့ထိတွေ့နှင့်အတူအခြားကစားသမားများအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတဆင့်စကားပြောနှင့်စစ်မှန်သောလိင်မျှင်။~တွေ့ဆုံ။
ကျွန်တော်သိဖုတ္စက္အတွက်ချစ်စရာအနည်းငယ်သာမြင်းမကအသုံးအများဆုံး fetish နှင့်ကြိုက်တတ်တဲ့သင်သင်တို့စောင့်သောဤတဏှာသည်မိမိတို့အဘို့။ ဒါကြောင့်ဖွင့်သည့်အခါကျနော်တို့တည်ဆောက်ဤ၊ကျနော်တို့သေချာဖန်ဆင်းတော်စားသမားရဖို့စုစုပေါင်းအပ္သည္။ ဟူသောအချက်ကိုမှတပါးကျွန်တော်မမေးကြဘူးအဖြစ်ပူးပေါင်းဖို့သင်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပါသည္ကိုဆက်ကပ်လုံးဝကိုအခမဲ့ဂိမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှမီကစားရန်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပြီအသက္ ၁၈။ ထိုအခါသင်ကအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်နှင့်ကစားအားလုံးဒီ MLP xxx တိုက်ရိုက်ဂိမ်းများအတွက်ငွေကြေးအ၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့စက်ကိရိယာကိုသုံး။, ကျနော်တို့သေချာဖန်ဆင်းတော်သာထည့်သွင်းရန် HTML၅ ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်၊ဒါကြောင့်ယုတ် bronies ကနေအားလုံးပလက်ဖောင်းများအနှံ့အတူတူရနိုင်နဲ့ပျော်မွေ့သူတို့ရဲ့လိန်။ ကျွန်တော်ပင်ထည့်သွင်းအသိုင်းအကြောင်းအင်္ဂါစေထိတွေ့နှင့်အတူအခြားကစားသမားများနှင့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်တာတစ်လိုင်းချက်တင်အတွက်ဆိုက်၊ဘယ်မှာသင်ရှိသည်နိုင်၏တန်ချိန်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာအရွယ်ရောက်က်ပ္။ စူးစမ်း၏MLP fetish နှင့်အတူငါ့ချစ်မြင်းလိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။